Nhau - Musi waNovember 12, Sincoheren akaburitsa chigadzirwa chazvino – Emsculpt.
Musi waNovember 12, Sincoheren akaburitsa chigadzirwa chazvino – Emsculpt.
Musi waNovember 12, Sincoheren akaburitsa chigadzirwa chazvino – Emsculpt. Iyi kambani yemuchina yanga ichitsvaga nekuvandudza muchina uyu kwemakore maviri uye yaita zviuru zvemakiriniki bvunzo, kungo gadzira chigadzirwa cherunako icho chinoenderana nevatengi.
Iko kune maviri mamodheru echigadzirwa, imwe idesktop modhi, iyo inokodzera zvakanyanya kune vatengi vega kana epamba runako salons, uye imwe yakatwasuka, iyo inonyanya kukodzera kune runako salons kana makiriniki. Vatengi vanogona kusarudza zvinoenderana nebhajeti ravo. Iye zvino emsculpt ndiwo Muchina unozivikanwa kwazvo wekutsva kwemafuta, kuvaka mhasuru nekusimudza matako, zvachose pasina mhedzisiro, Hapana chinokanganisa, pasina kuvhiyiwa, pasina nguva yekuzorora.
Emsculpt chishandiso 2020 chinonyanya kufarirwa mudziyo wekutsva kwemafuta, kuvaka mhasuru nekusimudza matako, runako salon, kiriniki yerunako, nzvimbo yekutsvedza, Gym zvese zvinogona kupa kurapwa uku.
Nekuwedzera kwekumanikidza kwebasa munharaunda yanhasi, unogona kunge wakaneta mushure mekubva kubasa, uye hausisina simba rekumhanya kana kuenda kujimu. Asi ikozvino uine emsculpt, iwe unongoda kurara ipapo uye unakirwe nemesculpt kurapwa.
Kukupa iwe kunzwa kwekusimba, uye iwe unogona zvakare kutarisa nhau uye kuteerera kumimhanzi pasina kunonoka hupenyu hwako hwakajairwa.
musimboti wekurapa wakakwirira-kusimba wakanangana nemagetsi emagetsi.
Iyo imwechete emsculpt chikamu inokonzeresa zviuru zvezvisimba zvine simba zvetsandanyama izvo zvakakosha zvakanyanya mukuvandudza toni uye kusimba kwemhasuru dzako, Imwe Emsculpt kurapwa kwakaenzana nekuita zviuru makumi maviri zvemakonzo mumaminitsi makumi matatu.
Ichi chishandiso chakakodzera kwazvo kuisa mari, 20-30 mineti yekurapwa paine mashoma emisangano mina yakarongwa mazuva 2-3 akapatsanurwa. Wako mupi achakubatsira iwe kugadzira chirongwa chekurapa chakanangana nezvinangwa zvako.
Muchina unonamira zvakanyanya kune vatengi, uye chiyero chekushandisa chemuchina chakakwirira kwazvo
zvinoreva kuti iwe unenge mwedzi mumwe iwe unogona kuwana mari yekudyara kumashure
Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota taura nesu kuti tikurudzire mutengo wemutengo, ikozvino nyowani mutengi haukwanise imwe yemahara coupon kukosha 300 USD, mirira kubvunza kwako!